တူနီးရှားနိုင်ငံ - ဝီကီပီးဒီးယား
ကိုဩဒိနိတ်: 34°N 9°E﻿ / ﻿34°N 9°E﻿ / 34; 9
တူနီးရှားနိုင်ငံကို ရုံးသုံးဘာသာစကားဖြင့် တူနီရှား သမ္မတနိုင်ငံဟု ခေါ်ဆိုကြပြီး အာဖရိက တွင် မြောက်ဘက်အကျဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ မာဂရပ် ဒေသအတွင်းတွင် တည်ရှိသော နိုင်ငံဖြစ်ပြီး အနောက်ဘက်တွင် အယ်လ်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် လစ်ဗျားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဘက်နှင့် မြောက်ဘက်တို့တွင် မြေထဲပင်လယ်တို့က ဝန်းရံထားကြသည်။ ဧရိယာ စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၆၄,၀၀၀ (၁၆၅,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာ) ခန့် ရှိပြီး လူဦးရေ ၁၀.၄ သန်းကျော် ရှိသည်။ နိုင်ငံ၏အမည်မှာ နိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင် ရှိသော မြို့တော် တူနစ်မြို့ကို အစွဲပြု၍ ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။
الجمهورية التونسية (အာရပ်)
République tunisienne (ပြင်သစ်)
ဆောင်ပုဒ်: حرية، كرامة، عدالة، نظام‎
နိုင်ငံတော် သီချင်း: حماة الحمى‎
(အင်္ဂလိပ်: "Defenders of the Homeland")
Location of Tunisia in northern အာဖရိကတိုက်မြောက်ပိုင်းရှိ တူနီရှားနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ
ပြင်သစ် (အုပ်ချုပ်ရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ပညာရေး)
အာရပ်-ဘာဘာ ၉၈%၊ ဥရောပ ၁%၊ ဂျူးနှင့် အခြား ၁% 
ပြည်ထောင်စု တစိတ်တပိုင်းသမ္မတ ဖွဲ့စည်းပုံသမ္မတနိုင်ငံစနစ်
• ရှေးဟောင်းကာသေ့ချ်ခေတ် စတင်ခြင်း
• ဗန်ဒယ်နိုင်ငံ စတင်ခြင်း
• အာဂါလာဘစ်နိုင်ငံ စတင်ခြင်း
• ဖာတီမစ် ကာလိဖိတ်နိုင်ငံ စတင်ခြင်း
• ဇူရစ်မင်းဆက် စတင်ခြင်း
• ဟာဆစ်မင်းဆက် စတင်ခြင်း
• ဟာဆီနိတ်မင်းဆက် စတင်ခြင်း
၁၇၀၅ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်
• ပြင်သစ်မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခြင်း
၁၉၅၆ ခုနှစ် မတ်လ ၂၀ ရက်
• သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့
၁၉၅၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်
• ၁၉၈၇ ခုနှစ် စစ်အာဏာသိမ်းခြင်း
၁၉၈၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၇ ရက်
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
• ဒုတိယ သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ် ကြေငြာခဲ့
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၀ ရက်
၁၆၃,၆၁၀ km2 (၆၃,၁၇၀ sq mi) (အဆင့်: ၉၁)
၁၁,၇၀၈,၃၇၀ (အဆင့် - ၈၁)
၇၁.၆၅/km2 (၁၈၅.၆/sq mi) (အဆင့် - ၁၁၀)
မြင့် · ၉၅
တူနီးရှား ဒီနာ (TND)
↑ Tunisia Constitution, Article4(26 January 2014)။9February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Tunisian Constitution, Article 1 (26 January 2014)။9February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Translation by the University of Bern: "Tunisia isafree State, independent and sovereign; its religion is the Islam, its language is Arabic, and its form is the Republic."
↑ "Tamazight language"။ Encyclopædia Britannica။
↑ Nawaat – Interview avec l' Association Tunisienne de Culture Amazighe။ Nawaat။
↑ Gabsi, Z. (2003)။ An outline of the Shilha (Berber) vernacular of Douiret (Southern Tunisia)။ PhD Thesis, Western Sydney University။
↑ Tunisian Amazigh and the Fight for Recognition – Tunisialive။ Tunisialive။ 25 December 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Genetic structure of Tunisian ethnic groups revealed by paternal lineages" (in en) (October 2011). American Journal of Physical Anthropology 146 (2): 271–280. doi:10.1002/ajpa.21581. PMID 21915847.
↑ Tunisia။ International Religious Freedom Report for 2011, United States Department of State – Bureau of Democracy Human Rights and Labor။
↑ The Constitution of the Tunisian Republic။
↑ Frosini၊ Justin; Biagi၊ Francesco (2014)။ Political and Constitutional Transitions in North Africa: Actors and Factors။ Routledge။ p. 4။ ISBN 978-1-317-59745-2။
↑ National Institute of Statistics-Tunisia။ National Institute of Statistics-Tunisia။ 28 November 2019 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 13 October 2021 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ Tunisia။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့။
↑ Report on the Delegation of تونس.။ Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (2010)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တူနီးရှားနိုင်ငံ&oldid=726844" မှ ရယူရန်
၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၂:၀၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။